Rikoodh Ay Messi & Ronaldo Ku Riyoon Karin Ayuu Dhigayaa - Radio Risaala: Somali News Online
Home Ciyaaraha Rikoodh Ay Messi & Ronaldo Ku Riyoon Karin Ayuu Dhigayaa
Rikoodh Ay Messi & Ronaldo Ku Riyoon Karin Ayuu Dhigayaa
“Si aad u noqoto ciyaaryahan aad u sareeyaa waa inaad xilli ciyaareed walba soo bandhigtaa qaab ciyaareed aad u fiican, kaliya ma ahan hal xilli ciyaareed laakiin si joogta ah waa inaad u ciyaartaa” sidaasi waxaa yiri tababaraha Manchester City Pep Guardiola.
Macalinka reer Spain waa runtii qaab ciyaareedka fiican ee joogtada ah waa midka ciyaaryahan ka soo dhex saara ciyaartoyda kale ee la ciyaarta.
Spain waxaa ka ciyaara ciyaaryahan qarka u saaran inuu jabiyo rikoodh ay ku adag tahay xitaa in Ronaldo iyo Messi ay dhigaan: Waa Inaka Williams.
Xiddiga reer Spain ma uusan seegin xitaa hal kulan tan iyo bishii April 2016. Wadar ahaan waxa uu ciyaaray 141 kulan oo xiriir ah.
Ma dhaawacmin, ganaax kuma maqnaanin, ma nasanin xitaa duray kuma dhicin, sida Neymar dhalashada walaashiis darteed uma diidin inuu u dheelo Athletic Bilbao.
Inaki Williams waa xiddig si weyn u raaca qaab nololeed caafimaad leh.
Williams waxa uu Athletic Bilbao u ciyaarayaa tan iyo yaraantiisii, wuxuu halyeey ka noqday kooxda.
Muddo afar sannadood ah ayuu isbuuc walba argagixinayaa kooxaha isagoo aan kulan maqnaanin. Mudadaan waxa uu Inaki Williams ciyaaray labo jibaarka kulamada uu dheelay xiddiga PSg Neymar, inkastoo kooxda Faransiiska ay tartamo ka badan kuwa Athletic Bilbao ay ciyaarto.
Sirta ka danbeysa in Williams uu kulan walba ciyaaro afartii sannadood ee ugu danbeysay wuxuu ku sheegay inay tahay nolosha farxada leh ee uu ku qaadanayo deegaan Bilbao oo qoyskiisa ay u soo haajireen markii ay ka soo tageen Ghana.
Previous articleKenya & QM oo ka wada-hadley Ammaanka Soomaaliya
Next articleSomalia: IMF and World Bank Consider Somalia Eligible for Assistance Under the Enhanced Heavily Indebted Poor Countries (HIPC) Initiative